A na-anụ ọkwa Google ka ọ wepụta ekwentị nke ya n'afọ a | Gam akporosis
Google ga-eweputa ama nke ya na ngwucha afo
Anyị na-eche ịmatakwu banyere ekwentị Nexus ọhụrụ nke ahụ ga-erute, ma eleghị anya, ọnwa Septemba. Nefọdụ Nexus na-arụ ọrụ na purest version nke gam akporo na pụrụ ịchọta na na-arụpụtara site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka Huawei, HTC ma ọ bụ Motorola.
Mana ọ bụrụ na akụkọ ọhụrụ ahụ ruru anyị aka ziri ezi, Google na-eme atụmatụ -eme ka gị onwe gị ama. Site na The Telegraph na-abịa na akụkọ Google ga-ewepụta ekwentị ya maka afọ a. Enyere ozi a na akwụkwọ a site na ebe a pụrụ ịdabere na ya, ebe ndị ọzọ na-ekwusi ike na Google na-ekwurịta okwu ugbu a na ndị ọrụ iji wepụta ama nke ya.
A ga-enwe akụkọ a Ebumnuche Huawei iji ya OS dika anyi zutere last week? Asịrị a nwere ike iduga Google tinyekwuo nrụgide n'ahịa nke ekwentị gị na-esetịpụ ihe atụ nke ihe ịmalite. Morechịkwa akụkụ ọ bụla nke ngwaọrụ ahụ ga-echegbu ndị nrụpụta na ha ga-atụfu nnwere onwe ụfọdụ gbasara imewe, arụmọrụ na nkwado. Anyị nwekwara ike ịkọ akụkọ a na nke onye ọrụ Samsung nke ga-eme ka ekwentị ha niile gaa na Tizen n'oge adịghị anya, ebe Huawei kwukwara ihe yiri nke a maka ịhapụ gam akporo.
N'oge a Google ekwughi ihe ọ bụla banyere asịrị ahụ pụtara na akwụkwọ akụkọ dị mkpa. Na na kwuru, Google ọ gbachibeghịkwa nkịtị n'ọchịchọ ya ibute ụzọ wepụta ekwentị nke ya. Ihe doro anya bụ na ọ bụrụ na ị ziri ezi banyere mpụta nke ekwentị gị, ihe ga-agagharị n'ihe metụtara ndị mmekọ ngwaike ya yana n'ihe niile metụtara gam akporo na ndị nrụpụta na-ebupụta OS na OS a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga-eweputa ama nke ya na ngwucha afo
Anu ulo: Emeputara, Electronic Arts 'nzọ maka egwuregwu dị elu-3